यो कस्तो दुर्लभ चीज ? एउटै दानाबाट रु ८ लाख आम्दानी ! (भिडियोसहित) – NamoBuddha Khabar
यो कस्तो दुर्लभ चीज ? एउटै दानाबाट रु ८ लाख आम्दानी ! (भिडियोसहित)
मंगलबार, साउन १३, २०७७ | १०:३९:५३ |
धुलिखेल–नेपालको काभ्रे जिल्लास्थित तेमाल गाउँपालिकाका एक किसानले यो ८ मुखे आकृतिको बुद्धचित्तको माला दाना फलाएका छन् । जुन दुर्लभ जस्तै मानिएको छ । सामान्य आकारका माला त प्रशस्तै फलेको पाइन्छ र झन यो कोरोना महामारीको अवस्थामा सामान्य अकारका मालाको बजार सोचेजस्तो छैन । अहिले व्यापारीले यसको आकृतिको आधारमा मुल्य तोक्न थालेकोले बुद्धचित्त मालाको दाना आकृतिले निकै प्रभाव पारेको हो ।
जत्ति मुखे(सुरे) आकृतिका माला फल्छ त्यत्तिनै फलिफाप । तेमाल बोल्देका ति किसानले ८ मुखे आकृतिको एउटै दानाको रु ८ लाखमा बिक्री गरेको बताएका छन् । अन्य ठाउाँमाचाँहि कत्तिले फलाए ? यो सबैको चासोको विषय बनेको छ । ति किसानले बिक्रि गरेको आधारमा हिसाब गर्दा ८ मुखे आकृतिको एउटा माला अर्थात १०८ वटा दाना यस्तै प्रकारले फलेमा एउटै मालाको रु १ करोड ६४ लाख आम्दानी हुने देखियो ।
८ मुखे दानाको तुलनामा यसभन्दा मुनि अंक आकृतिका बुद्धचित्त मालाको दानाचाँहि अन्य केहि किसानहरुले पनि फलाएको पाईयो,यसको पनि बजार राम्रोनै छ । भविष्यको बजारको आंकलन गर्ने खुवीका किसानलेचाँहि ३ वर्षअघिदेखीनै ३ देखी ७ मुखे आकृतिका दानाको विरुवा रोप्न थालिसकेका थिए । तर ८ मुखे आकृतिको दाना फलेको पुष्टि भएको पहिलो पटक हो ।
८ मुखे र यसभन्दा मुनिअंकका महत्वपूर्ण आकृतिका दाना कमै मात्रामा फलेकोले पनि यसको मुल्यले आकाश छोएको व्यापारी बताउँछन् । बुद्ध धर्ममा विशेष महत्व रहने माला सम्पूर्ण मानव जातिलाई शुभ हुने भएकोले यसको बजार अहिले विश्वव्यापी विस्तार हुदै गएको छ ।
यसरी अहिले आकृतिका आधारका साथै ग्रेडिङका आधारमा बुद्धचित्त मालाको बजार कस्तो छ ? खोज अनुसन्धानकै आधारमा हामीले यो भिडियो सामाग्री पनि तयार पारेका छौं ।